Kedu ihe bụ ifufe azụmahịa: njirimara na ịmata ihe | Meteorology netwọkụ
Gịnị bụ ifufe ahia
Portillo nke German | 05/10/2021 14:03 | Meteorology
Otu akụkụ nke ihe na -agbanwe ikuku bụ ikuku ahịa. Ha dị nnukwu mkpa, ọkachasị kemgbe narị afọ nke XNUMX n'ihi na ọ nwere nnukwu mmetụta na igodo ụgbọ mmiri. Agbanyeghị, ọ bụghị ọtụtụ mmadụ maara Gịnị bụ ifufe ahia. Ka ọ dị ugbu a, a ka nwere ọtụtụ ndị a na -agba ume ka ha na -agagharị n'ihi ikuku azụmahịa ebe ọ bụ na ha bụ ihe na -eme n'etiti Ecuador na ebe okpomọkụ. Ha na-efegharị site na mgbago mgbago mgbago mgbago ugwu na site na mpaghara ndịda yana ha nọ na mpaghara Intertropical convergence a ma ama.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe ikuku ifufe bụ, kedu njirimara na mkpa ha.
1 Gịnị bụ ifufe ahia
2 Nhazi ikuku ikuku
3 Ebe ha no
Ifufe azụmahịa bụ ebili mmiri nke na -efe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'oge ọkọchị na Northern Hemisphere ma na -adịkarị oge n'oge oyi. Mmetụta ya na-adị n'etiti etiti ụwa na ebe okpomọkụ, ebe mgbago ebe ugwu na ndịda ruru ihe dịka 30º. Ha bụ oke ikuku na -adịchaghị mma, na -enwekarị ọsọ ọsọ dị ihe dị ka 20 km / h.
N'ihi ike ha na-anaghị ebibi ihe na nkwụsi ike ha pụtara n'oge ọkọchị, ha nwere akụkọ ihe mere eme n'ihi na ha na-ekwe ka ịdị adị nke ụzọ azụmaahịa dị n'oké osimiri. Na mgbakwunye, ha bụkwa ọrụ maka ime ka o kwe omume gafee Oké Osimiri Atlantic site na ụgbọ mmiri gaa United States. Onye mbụ mepụtara maapụ zuru oke nke ifufe ahia na oke mmiri ozuzo bụ Edmund Halley, onye bipụtara maapụ ahụ na 1686 na nyocha nke jiri data sitere na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri azụmahịa Britain.
Azụ ahịa na -efesa ifufe si na NE (northheast) na mpaghara ugwu ụwa ruo SW (ndịda ọdịda anyanwụ) n'elu ụwa, wee fụọ site na SE (ndịda ọwụwa anyanwụ) ruo NW (northwest) na ala nke ụwa, ya bụ, na mpaghara ndịda ụwa. Ntuziaka ya nwere bụ n'ihi mmetụta Coriolis, nke na -eme ka ntụgharị ụwa na -emetụta ihe na -agagharị ma gbanwee mmegharị ha n'ụzọ dị iche dabere na mbara ụwa nke ha nọ.
Nhazi ikuku ikuku
Ebe ifufe ahia si malite bụ ka ụzarị anyanwụ si ekpo ọkụ n'akụkụ ụwa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche. A chịkọtara usoro nhazi ikuku ifufe n'okpuru:
N'ihi na ụzarị anyanwụ na -enwe mmetụta dị ukwuu n'oge mmetụta zuru oke, ya bụ, n'ụzọ kwụ ọtọ, akara ụwa na -enweta okpomọkụ karịa, bụ ihe kpatara okpomoku zuru ụwa ọnụ. Banyere ifufe azụmahịa, mgbe okpomọkụ anwụ na -ada n'elu ala na mmiri nke mpaghara mpaghara, okpomọkụ ga -emesịa laghachite n'igwe dị elu nke ukwuu, si otú a na -ekpo oke ọkụ. Ikuku a na -agbasawanye ma na -efufu njupụta mgbe ọ dị ọkụ, na -adị ọkụ, ma na -ebili.
Ka ikuku na -ekpo ọkụ na -ebili, ikuku oyi sitere na ebe okpomọkụ ga -ejupụta oghere.
N'ụzọ dị iche, ikuku na -ekpo ọkụ nke na -ebili n'akụkụ equator na -agagharị na latitude nke 30º, agbanyeghị na mpaghara ala nke ọ dị.
Ka ọ na -eru ugbu a, ọtụtụ ikuku ajụla nke ọma ka ọ daa na ọkwa elu, na -akpụchi mkpọchi mechiri emechi akpọrọ batrị Hadley.
Otú ọ dị, ọ bụghị ikuku niile ga -ajụ oyi ọzọ. A na -ewe iwe dị ọkụ ọzọ wee na -aga n'ihu na batrị Ferrer dị n'etiti 30º na 60º nke latitude, wee na -aga n'ihu n'ihu okporo osisi.
Mmetụta Coriolis bụ ihe kpatara na ifufe ndị a anaghị efe efe na -aga n'ihu mana ọ na -agbachapụ agbachapụ, na ihe kpatara na echiche gị na mpaghara ala abụọ agbanwere ntakịrị.
Ọzọkwa, a na -akpọ ebe nzukọ nke ifufe azụmaahịa nke ala abụọ, ma ọ bụ obere mpaghara dị n'etiti ha, ITCZ, mpaghara njikọta ebe okpomọkụ. Mpaghara a dị ezigbo mkpa maka ndị na -anya ụgbọ mmiri n'ihi na ọ nwere nrụgide dị ala yana ọtụtụ ihe nrụzi. Oké mmiri ozuzo na -adịkarị oge niile na ọnọdụ ha na -agbanwe mgbe niile na mmalite nke oke ikuku.
Ebe ha no
Dịka anyị kwurula na mbụ, a na -eme ikuku ikuku azụmaahịa na mpaghara niile, gụnyere mpaghara dị n'etiti equator na ogo 30 n'ebe ugwu. Nke a emetụtala ọtụtụ mba. Agwaetiti Canary nwere ifufe azụmahịa, nke kpatara na ihu igwe agwaetiti ndị a dị na Spain. N'oge oyi, mmetụta na -akwụsị akwụsị nke anticyclone na Azores anaghị emetụta ha. Ọnọdụ ya dị nso na Tropic of Cancer na njirimara ala ya na -enye ya ihu igwe na -ekpo ọkụ n'oge ọkọchịỌ bụ ezie na ọ dị anya, ọ yiri Oké Osimiri Mediterenian.
Ha nwekwara mmetụta dị mkpa na mba dịka Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador ma ọ bụ Costa Rica, ha niile na -esite na mpaghara ebe okpomọkụ wee nwee ọnọdụ ihu igwe dị mgbagwoju anya nke na -ebute mbata nke ifufe azụmahịa. Ndị a na -adịgasị iche iche dabere na mpaghara mpaghara na oge a kara aka.
Buru n'uche na agbanyeghị na ifufe ahia na oke mmiri ozuzo nwere njikọ chiri anya, ha dị anya site n'otu na ekwesighi inwe mgbagwoju anya. Ifufe azụmahịa na -adị nwayọọ ma na -adịkwa ike mgbe niile, ebe oke mmiri ozuzo bụ ifufe nwere oke ifufe nke na -ebute oke mmiri ozuzo.
Enyerela anticyclone dị na Azores aha ahụ maka ihe kpatara ya. Nke a bụ n'ihi na ọ na -arụ ọrụ ọkachasị na mpaghara Atlantic ebe agwaetiti ndị ọzọ dị, ya bụ, Azores. Dabere na mwepụ nke anticyclone, mmetụta na -apụtaghị ìhè nke ikuku azụmaahịa na agwaetiti Canary nwere ike ịdị ukwuu ma ọ bụ karịa.
N'oge oyi, anticyclone a dị ezigbo nso na agwaetiti Canary. Nke a na -ebute nkwụsi ike ka ukwuu na obere ifufe azụmahịa. Ya mere, ikuku oyi anaghị enwe obere mmetụta n'àgwàetiti ndị ahụ. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi iji mee ka ihu igwe dị mma ma na -ekpo ọkụ n'oge oyi.
N'oge ọkọchị, anticyclone na -akwaga n'elu Azores. Ka ọ na -aga n'ihu na agwaetiti Canary, mmetụta ikuku nke azụmahịa na -emetụta nke ukwuu. Ya mere, ifufe ahia oge ọkọchị na -efe karịa, yabụ na ọnọdụ okpomọkụ agaghị agbada.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ihe bụ ifufe azụmaahịa ma wedata njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Gịnị bụ ifufe ahia
DeepMind AI nwere ike ịkọ amụma ihu igwe ka mma
Belt nke Orion